Toherin’ireo mpikatroka aterineto ao Hong Kong ho toy ny fandrahonana ny fahalalahana antserasera ny fandràran’ny fitsarana ny votoaty ‘mahery sehatra’ · Global Voices teny Malagasy
Mety hoterena hanakana ny fidirana amin'ny sehatra isankarazany ny Mpanome-Tolotra-Aterineto
Voadika ny 18 Novambra 2019 5:45 GMT
Ny sekreteran'ny fitsarana ao amin'ny Fitsarana Avo no nametraka ny fangatahana fandidiana tamin'ny 31 Oktobra. Mangataka amin'ny fitsarana izany mba handràra ny rehetra tsy:
Tsy vitany hoe hisy fiantraikany amin'ny zon'ny mpiserasera tsirairay amin'ny fahalalahana maneho hevitra ilay fehezan-dalàna fa hanery koa ireo MTA (FAI=ISP) na ny mpandraharaha antserasera hanivana na hanaisotra votoaty ara-politika. Ny fizarana (a) amin'ilay fehezan-dalàna dia azo ampiasaina hikendrena ireo mpisera aterineto manaparitaka vaovao momba ny fihetsiketsehana an-tserasera, raha mety hisy fiantraikany amin'ny MTA sy ireo mpandraharaha amin'ny sehatra aterineto izay mety ho voampanga ho “manampy, mandrisika na manome lalana” ny mpiserasera azy ireo hanaparitaka vaovao toy izany kosa ny fizarana (b). Araka ny fanazavan'ny Internet Society Sampana Hong Kong hoe:
Namoaka taratasy misokatra ho an'ny governemanta Hong Kong tamin'ny fiandohan'ny volana septambra ihany koa ny vondrona #KeepItOn, manohitra izay politika mety hanimba ny aterineto misokatra:
Tamin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra, nanonona ny Lalàna Vonjy Maika mba hampihatra ny lalàna Anti-Mask (Antisarontava) ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Carrie Lam. Nandritra izany fotoana izany, nilaza i Ip Kwok-him, mpanao politika pro-Beijing sady mpikambana ao amin'ny Filankevitra Mpanatanteraka fa tsy hanakana ny fandaniana lalàna vaovao hamerana ny aterineto mba hanakanana ny fihetsiketsehana ny governemanta.
Naneho ny ahiahiny lalina manoloana ilay fehezan-dalàna ihany koa ny Internet Society (Iraisampirenena):